I-Microcement: impahla edingeka kakhulu emhlabeni wezinguquko | Bezzia
I-Microcement: into edingeka kakhulu emhlabeni wezinguquko
Bezzia | 19/06/2022 08:48 | Umhlobiso, Tricks umhlobiso
El ikhaya liyisizinda senhlalakahle yethu, okuqinisekisa ukuthi singaphansi kwekhwalithi yezindinganiso zokuphila ezisifanele. Ukuze ukhuphule amanani anjengokuhlala, ukunethezeka noma ubuhle, ukwenza uguquko kungenye yezenzo ezanelisa kakhulu. Umsebenzi esingawuthuthukisa sisodwa uma sifunda ngokucophelela izinketho ezihlukene ezikhona emakethe yamanje; njenge-microcement. Impahla eya ngokuya idumile esezimise njenge-eksisi kufilosofi ye-DIY (yenza ngokwakho).
1 Iyini i-microcement futhi ingafakwa kuphi?
2 Yiziphi izinzuzo ze-microcement
Iyini i-microcement futhi ingafakwa kuphi?
Lapho sithatha isinqumo sokwenza izinguquko ekamelweni elilodwa noma amaningana endlu, kubalulekile ukwenza ukuhlaziywa kwemikhiqizo ehlukene esinayo. Ngokwenza kanjalo, maduzane sizithola sibhekene ne- i-microcement: impahla eyenziwe usimende, ama-resin, izithasiselo kanye nezingulube zamaminerali ezingenziwa ngokwezifiso ngokugcwele. Lesi sihloko sishintsha yonke into emhlabeni womklamo wangaphakathi futhi, uma sitshala imali emincane elungele ukusetshenziswa, singayisebenzisa ngokwethu. ukufinyelela amadigri amasha obuhle bokuhlobisa.
Ngenkathi ezinye izinto ezisetshenziswayo zisiphoqa ukuthi sithathe izinqubo zokwakha ezibizayo, i-microcement ilandela igagasi le-DIY. Ngale ndlela, sinamandla senze izinguquko emakamelweni endlu ngayinye ngaphandle kwezici ezifana nemali noma isikhathi esibekwe ngokumelene nathi. Ngaphezu kwalokho, i-microcement iyasebenza kuzo zonke izinhlobo zezindawo ezingaphezulu, okuhlanganisa amathayela, amathayili kanye nebhodi elikhonjiwe. Umsebenzi esiwufeza ngezinsuku ezimbalwa nje ukuze sijabulele indawo eqanjiwe, enomklamo oqhubekayo futhi evumelane nalokho esikuthandayo.
Ukusetshenziswa kwe-microcement kuthandwa kakhulu ezindlini zokugezela, ngenxa yekhono layo lokuqeda amalunga phansi nasezindongeni ukushiya ukubonakala kokuqhubeka. Noma kunjalo, noma yikuphi ukuncika kwesakhiwo kwamukela impahla ngezandla ezimhlophe, njengekhishi, igumbi lokulala, i-patio yangaphandle noma igumbi lokuhlala. Konke lokhu kukwazi khetha ngokukhululeka okuphelele kokubili ithoni kanye nokuthungwa kwentol. Ngamanye amazwi, ngenxa yohlu olubanzi lwemibala evela kubakhiqizi abakhulu be-pigment, sizoba nomklamo esihlale siwuphupha.
Yiziphi izinzuzo ze-microcement
Nakuba kuyiqiniso ukuthi ukuguquguquka okuphathelene nokusetshenziswa kwayo kanye nemibala esingayikhetha kakade kuyisizathu esanele sokumelela le nto, sithola ezinye izizathu eziningi okufanele sizihlaziye. Khumbula ukuthi intengo yalo mkhiqizo ayishibhile ncamashi uma siyiqhathanisa nezinye izinketho; nokho-ke, ngokwazi ukuthi songa ngokuqasha amasoni, kuyacaca ukuthi kungenye yezindlela ezishibhe kakhulu emakethe. Kodwa imali akuyona ukuphela kokukhathazeka ezingqondweni zethu ngesikhathi sokuvuselela, ngakho Ake sibone amakhono amaningi we-microcement.
Owokuqala ngothi ukunamathela okumangalisayo okuvezayo kuzo zonke izinhlobo zezindawo, noma ziqondile noma ezivundlile noma ezingaphakathi noma ngaphandle. Into engathathi isikhathi eside ukuthi iqale ukusebenza, ngenxa yezakhiwo zayo ezomisa ngokushesha. Ngokufanayo, kufanelekile ukusho inkomba yayo ephezulu yokumelana, ikwazi ukumelana nokuhuzuka, imihuzuko namagalelo Njengezinye izinto ezimbalwa. Ngokuqondene nokugcinwa kwayo, i-microcement kulula kakhulu ukuyihlanza: Kudingeka amanzi kuphela nensipho engathathi hlangothi. Izinzuzo ezehlukene, kanye nokunakekelwa kwemvelo okubandakanya ukusetshenziswa kwayo, ezikhuthaza abantu abaningi ukuthi bakusebenzise ezindlini zabo.
Ngakho-ke, njengoba wazi yonke into i-microcement engakwenzela yona, sekuyisikhathi sokuthi ufunde yiziphi izitolo ezingcono kakhulu ongatshala kuzo kule nto. Kunjalo, inguquko yekhaya lakho ezokwenza ukuthi ujabulele nsuku zonke ngokugcwele.
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » Umhlobiso » Tricks umhlobiso » I-Microcement: into edingeka kakhulu emhlabeni wezinguquko
Ama-Chickpeas Afakwe Izinongo Namazambane kanye Nophizi
6 amamuvi ongawabona ngaphambi kokuphela kukaJuni